Imifuno esi-8 yokuhlala ilungele ikhitshi lethu | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Imifuno eli-8 enokukhula ibuye emva komnye
UManuel Ramirez | | Ezolimo zendalo, I-ecology
Sele sithetha ngawe ingxaki yokungcoliseka komhlaba kwaye indlela iindawo ezithile ezithoba ngayo singaqondanga ngenxa yezinto ezahlukeneyo, sikwazi ukuguqula iziza ezazigqibelele ukukhula kwezinye ukuba akunakwenzeka ukutyala into kuzo.
Namhlanje sikuphathele imifuno eli-8 banokuphinda babuyele kaninzi kangangoko bafuna ezinje nge chives, igalikhi, iklabishi yamaTshayina, iminqathe, ibasil, iseleri, iroma yeletisi okanye i-endive kunye necoriander. Isibhozo samathuba okusoloko kukho olu hlobo lwezithako ezikhoyo ekhitshini lethu kwaye esivumela ukuba singaxhomekeki kangako kumhlaba esiya kuwutyala kuwo. Ngembiza yeentyatyambo okanye isitya esinamanzi singazifumana nanini na xa sifuna ngaphandle kokuchitha nantoni na ukuzithenga evenkileni.
3 Iklabishi yaseTshayina
7 I-lettuce yamaRomaine okanye i-endive
Iichives zingakhula kwakhona ukushiya isiqu esisikiweyo malunga nesentimitha enye okanye ezi-1 kwingcambu ukuze uzibeke kwiglasi encinci yamanzi egubungele njengoko ubona emfanekisweni.
Xa igalikhi iqala ukuhluma iingcebiso eziluhlaza, zinokuba njalo beka isitya seglasi esinamanzi amancinci. Amahlumela anencasa emnandi kunegalikhi kwaye angongezwa kwiisaladi, izitya kunye nezinye iindlela zokupheka.
Iklabishi yaseTshayina inokuphinda ikhule ngokuyifaka kwisitya esincinci ukubeka ingcambu emazantsi ngamanzi. Kwiveki e-1 ukuya kwezi-2, inokufakwa kwenye imbiza ngomhlaba ukuze kukhule intloko entsha yeklabishi.
Umphezulu womnqatha ungafakwa kwipleyiti enamanzi amancinci. Beka isitya kudonga lwefestile okanye kwindawo ekhanyiswe kakuhle, kwaye uya kuba namagqabi azakuphuma kwiminqathe ukwazi ukuyisebenzisa kwiminqathe
Beka amaqabunga amaninzi e-basil ngaphezulu okanye ngaphantsi 3-4 iisentimitha nganye kwiglasi yamanzi kwaye uyibeke ngokuthe ngqo elangeni. Xa iingcambu ziziisentimitha ezi-2 ubude, zityale kwiimbiza kwaye akukho xesha liza kuba sisityalo sazo
Sika isiseko se-celery kunye yibeke kwisitya samanzi ashushu elangeni. Xa amahlumela kunye namagqabi eqala ukukhula embindini, yibeke embizeni enomhlaba ukuze ikhule ngcono.
I-lettuce yamaRomaine okanye i-endive
Beka ifayile ye- I-lettuce yamaRoma ihluma kwisitya se-XNUMX/XNUMX sentimitha wamanzi, ukugcwalisa ukuya kuthi ga kwisiqingatha sesentimitha. Emva kweentsuku ezimbalwa, iingcambu kunye neziqu ezitsha ziya kuvela kwaye zinokufakwa emhlabeni.
Iziqu zecoriander Uya kukhula xa ufakwa kwiglasi yamanzi. Emva kokuba iingcambu zide ngokwaneleyo, zityala embizeni kwigumbi elikhanyisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » I-ecology » Ezolimo zendalo » Imifuno eli-8 enokukhula ibuye emva komnye
Ukuloba ulwandle olunzulu, iFrance ityholwa ngokuxoka